संसारपोस्ट संवाददाता – Page 276 – Sansar Post
Home ≫ Articles posted by संसारपोस्ट संवाददाता (Page 276)
स्थानीय लघु तथा घरेलु उद्यमीहरुद्धारा उत्पादित सामाग्रीहरुको बजारीकरणका लागि कोसेली घर संचालन गरिएको छ । जिल्लाको मोदी गाउँपालिकामा लघु तथा घरेलु उद्यमी तथा कृषकहरुद्धारा उत्पादित उपभोग्यीय बस्तुहरुको एकीकृत रुपमा बजारीकरण गर्नका लागि कोसेली घर अर्थात सौगात गृह संचालनमा ल्याईएको हो । मोदी गाउँपालिका वडा नं. २ पातीचौर बजारमा पसल संचालन गरिएको छ । स्थानीय घरेलु […]
प्रदेशका विकास योजनामा केन्द्रीय सरकारको हस्तक्षेप
हेटौंडा । ३ नम्बर प्रदेश सरकारले थालेका विकासका केही महत्वपूर्ण योजनामा केन्द्रीय सरकारको आर्थिक हस्तक्षेपका कारण समस्या उत्पन्न भएको छ । प्रदेशका लागि बजेटका हस्तान्तरित कार्यक्रमबाट संघीय सरकारले बजेट फिर्ता लगेको हो । शुरु भएका केही योजना सञ्चालनमा यसका कारण प्रदेश सरकारलाई अप्ठ्यारो परेको देखिएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, बन […]
प्रदेश– २ को स्तरीय सुरक्षा गोष्ठी सम्पन्न
गृहमन्त्री राम बहादुर थापा ‘बादल’ को प्रमुख आतिथ्यमा धनुषाको जनकपुरधाममा आयोजित कार्यक्रमबीच २ नम्बर प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठी शनिबार सम्पन्न भएको छ । नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम अनुरुप शुक्रबारदेखि उक्त गोष्ठी शुरु भएको थियो । गोष्ठी समापनका अवसरमा गृहमन्त्री थापाले राज्यको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डताको सुरक्षा महत्वपूर्ण भएको विचार व्यक्त गर्दै राज्य तथा संविधान […]
प्रदेश- ५ लाई अपाङ्ग मैत्री बनाउने अभियानमा छौँः मन्त्री बराल
यमलाल भुसाल, बुटवल । प्रदेश नम्बर ५ का सामाजिक विकास मन्त्री सुर्दशन बरालले प्रदेश ५ लाइ छिट्टै अपाङ मैत्री प्रदेश बनाइने दाबि गर्नुभएको छ । यस्का लागि सबैले हातेमालो गर्नुपर्ने उहाँको धारणा रहेको छ । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघको आठौं महाधिबेशनमा प्रदेश ५ भित्रबाट निर्बा्चित कार्यसमितिलाइ मंगलवार बधाई तथा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रमलाइ सम्बोधन गर्दै मन्त्री बरालले […]
विश्वकप क्रिकेटमा अस्ट्रेलिया सर्वाधिक सफल टिम हो । अहिलेसम्म पाँच पटकको उपाधि विजेता अस्ट्रेलिया छैटौं उपाधि जित्ने अभियानमा छ । २०१५ को विश्वकप विजेता अस्ट्रेलियालाई उपाधि जोगाउने चुनौती पनि उत्तिकै छ । बल टेम्परिङ प्रकरणमा अस्ट्रेलियाका खेलाडी परेपछि केही समय विवादित बनेको अस्ट्रेलियाले त्यसबाट पार पाइसकेको छ । उसले भारत र पाकिस्तानलाई उनकै भूमिमा हराउँदै […]
५१ सरकारी भवन निर्माणको योजना : लागत १४ अर्ब, बजेट ८ करोड !
६ जेठ, काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्रालयले विभिन्न सरकारी निकायहरुका लागि ५१ वटा आधुनिक र सुविधासम्पन्न भवन निर्माणको तयारी गरेको छ । यसका लागि १४ अर्ब बजेट चाहिने अनुमान गरिएको छ । तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यो कार्यका लागि जम्मा ८ करोड बजेट छुट्याइँदै छ । मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि पाएको सिलिङबाट […]
३ जेठ, चितवन । विजय सुवेदी तत्कालीन नेकपा एमाले चितवनको तीन पटकसम्म पार्टी प्रमुख भए । पहिलो पटक ०४९ सालमा नेकपा एमाले चितवनको पार्टी सचिव हुँदा उनी जम्मा २९ बर्षका थिए । उनी पार्टी प्रमुख भएको अर्को बर्षमा नै कविलासको दासढुंगाबाट रहस्यमय जीप दुर्घटनामा नेकपा एमाले महासचिव मदनकुमार भण्डारी र संगठक जीवराज आश्रितको निधन भयो […]